Ku safridda Yurub waxay dib ugu sii noqonaysaa dalxiisyo boqortooyo, kaymaha, iyo dabeecadda ugu quruxda badan iyo biyo-mareennada. Haddii aad u safreyso Talyaaniga ama Switzerland, qorshaynta a 2 Safarka euro, ama u hayaa usbuuc kaliya hal wadan oo Yurub ah,…
Safarka tareenku waa habka ugu badan ee loogu safro Yurub. Sidaa darteed, qaar ka mid ah saldhigyada tareenka ee ugu mashquulka badan adduunka waxay ku yaalliin Yurub iyo waqtiyada qaarkood, dunida oo dhan. In kasta oo ay dadku buuq badani ku jireen saacadihii ugu sarreeyay, dusha sare 5 busiest train stations in Europe are…
Ciao! Waad qorsheynta safarka ee Meyeydaan in Italy! Waa ku dhashay ee hormariyo iyo magaalo ballamo in elate oo aad loo Waxyoodo ahayn shuqullada aawadood ay of farshaxanka, naqshadaha, iyo jacaylkeeda cuntada. Italy is the true home…